‘Ndoda ropa remunhu’ | Kwayedza
‘Ndoda ropa remunhu’
06 Sep, 2019 - 00:09	 2019-09-05T17:38:49+00:00 2019-09-06T00:09:49+00:00 0 Views
VANHU vaive mudare vakakahadzika zvikuru apo mumwe mukomana akati mukoma wake anogara achimutyisidzira kuti anoda ropa remunhu uye kuti achamuuraya.
Nyowani Chikutula akataura mashoko aya mudare reHarare Civil Court mushure mekumhan’arira Godknows Chikutula.
“Mambo wangu, uyu mwana waamai vangu mutevedzani wangu uye tinotogara tose kuMbare paimba yaambuya vedu asi andishaisa mufaro. Anoti akadhakwa, ondituka zvinonyadzisira uye ari kundityisidzira hanzi ndiri kutoda ropa remunhu pano uye ndiri kuda kukuuraya,” anodaro.
Nyowani anoenderera mberi nekuudza mutongi Noah Gwatidzo kuti, “Akandipwanyira zvinhu zvangu zvandinoshandisa pabasa pangu akazvipisa izvo zvaita kuti ndiuye kuno nhasi sezvo anditambudza. Ndatove munhu ave kurarama mukungotya saka ndinokumbirawo mundibatsire negwaro redziviriro nokuti handizive zvaanondifungira.”
Godknows anoti ane dambudziko nechikumbiro chemukoma wake.
“Ndinopokana nechikumbiro chamukoma nokuti pavari kuti ndakavarova vanoreva nhema. Handisati ndambovarova uye handingarove mukoma wanguka, handipenge ini,” anodaro.
Anoti haana kumbobvira apisa zvinhu zvaNyowani zvaanoshandisa pabasa rake asi kuti akapisa mapuranga aakaona akaraswa.
“Mumwe musi ndakaona mapuranga aanoshandisa mukuita basa rake ari patinorasira marara ndokuvesa moto nawo sezvo ndaifunga kuti araswa. Ndakatozoshama pachiuya mapurisa ayo akandirova chaizvo,” anodaro.
Godknows hapana zvaakataura pamusoro pemashoko aNyowani ekuti anoti ari kuda ropa remunhu uye kuti anoda kumuuraya.
Mutongi Gwatidzo akapa Nyowani gwaro redziviriro.
Akakanda musvesvenenga wenyoka pakati pe...28 Jan, 2020
Ambuya ‘vanokumbira’mukuwash...24 Jan, 2020
Akarovesa mombe 20 nemheni24 Jan, 2020
Akakanda musvesvenenga wenyoka pakati peHarare